ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကနေ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ James Gunn ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ...? - MoviesFan
ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကနေ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ James Gunn ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ…?
ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိရေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Walt Disney Studios က ထိပ်သီးအကြီးအကဲတွေဟာ သူတို့ကုမ္ပဏီနဲ့ လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာ James Gunn ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်လောက်တုန်းက (ရုတ်တရက်ဆိုသလို) အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ James ဟာ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွေလောက်ကတည်းက သူ့ကိုယ်ပိုင် Twitter စာမျက်နှာထက်မှာ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သတ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ ဟာသတွေကို နည်းနည်းကြမ်းတမ်းစွာ သုံးစွဲရေးသားပြီး စတေးတပ်တွေအဖြစ် တင်တတ်လေ့ရှိခဲ့တာမို့ပဲလို့ သိရပါတယ်။
A secret friend is trying to sneak up on me. What’s up, Marley? ❤️🐒❤️ #monkey #monkeys #greatlifelongmonkeypal
A post shared by James Gunn (@jamesgunn) on Apr 16, 2018 at 7:01am PDT
တကယ်တော့ Walt Disney Studios ဆိုတာဟာ အားလုံးသိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကလေးသူငယ်တွေအတွက် ဇာတ်ကားကောင်းလေးတွေကို အဓိကထားပြီး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနေတတ်တဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် Twitter ပေါ်က James ရဲ့ မဆင်မခြင် ရေးသားမှုတွေက သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးစေနိုင်တာမို့ အခုလို အရေးယူလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီအကြောင်းကို Walt Disney Studios က Chairman တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Alan Horn က မီဒီယာတချို့နဲ့ တွေ့ရတဲ့အခိုက်မှာ တရားဝင် ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အခုတော့ အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် ဒါရိုက်တာ James ဟာ သူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Guardians Of The Galaxy ဇာတ်ကား 1 နဲ့2တို့ရဲ့ အဆက်ဖြစ်တဲ့၊ Guardians Of The Galaxy3ကို ဆက်ရိုက်ခွင့် မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီအဖြစ်ဆိုးအတွက် ဒါရိုက်တာ James ဟာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပြီး၊ မရည်ရွယ်ဘဲ မှားခဲ့မိသလိုဖြစ်သွားတဲ့ သူ့အမှားတွေအတွက် ကုမ္ပဏီက လူကြီးတွေကို တောင်းပန်စကား ဆိုခဲ့သေးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
When we’re shooting scenes on blue screen stages – like the end of #GotGVol2 – we do incredibly specific animations of the scenes before shooting – basically, making the movie once before we make it for real to decrease potential for error. So the cast, instead of being lost in these scenes with me screaming, “now look ataspaceship over there!” knows exactly what each shot is, and understands the sequence asawhole. The more we all know the movie we’re making, the more natural it is in the end. Anyway, this is me showing the guys the animated version of the big group hero shot and letting them know how we were going to do it right before shooting.
A post shared by James Gunn (@jamesgunn) on Jun 15, 2018 at 10:35am PDT
James အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သတင်းဆိုးကို ကြားကြားချင်း ဆိုသလိုပါပဲ။ GOTG ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ သူနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးကြတဲ့ Chris Pratt, Zole Saldana စတဲ့ နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ တခြားနာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တချို့ကလည်း သူတို့ကိုယ်ပိုင် Instagram, Twitter စတဲ့ စာမျက်နှာတွေကနေတစ်ဆင့် James ဘက်ကနေ မသိမသာလေး ရပ်တည်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခုရက်ပိုင်းထဲမှာတော့ GOTG အဖွဲ့သားများ တော်တော်များများဟာ ဒါရိုက်တာ James အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ပြဿနာအပေါ်မှာ သူတို့ထားရှိတဲ့ သဘောထားတွေကို Walt Disney Studios က တာဝန်ရှိလူကြီးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေပါ သိရအောင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ဖော်ပြသလာခဲ့ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ…
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ James ကို ထောက်ခံပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းက သူရုတ်တရက် အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကိစ္စအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားခဲ့ရပါတယ်”
GOTG ဇာတ်ကားတွေထဲက အဓိကဇာတ်ကောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသား Chris Pratt ရဲ့ Instagram ပေါ်မှာ အဲဒီလို အစချီထားတဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူတွေကို သိစေချင်တဲ့ စာတစ်စောင်လုံးရဲ့ အဓိက ဆိုလိုရင်းကတော့ James ကို GOTG ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ်ပြန်ခန့်စေချင်တာ မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလေးရဲ့အောက်ဆုံးမှာ Chris Pratt, Zole Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista နဲ့ Sean Gunn စတဲ့ GOTG ဇာတ်ကားထဲက အဓိကဇာတ်ဆောင် နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေအပြင် ကျန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တချို့ရဲ့ လက်မှတ်တွေကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီပုံလေးရဲ့အောက်မှာ Chris က…
“James ရဲ့ မသင့်တော်တဲ့ ဟာသတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက ကျွန်တော် မထောက်ခံခဲ့ပေမယ့်လည်း သူဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်အရ သူ့ကို အတွဲ ၃ မှာ ဒါရိုက်တာအဖြစ်နဲ့ ပြန်မြင်ချင်ပါတယ်”…. စသဖြင့် Caption ထိုးထားခဲ့သေးတာကိုလည်း မြင်ရပါသေးတယ်။
I believe this was the day I gotabee sting on my ear. 🐝 #marvel #GotG #guardiansofthegalaxy
A post shared by James Gunn (@jamesgunn) on May 9, 2018 at 11:27am PDT
အဲဒီတော့ GOTG အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ရပ်တည်အားပေးမှုကြောင့် ဒါရိုက်တာ James ဟာ မူလနေရာကို ပြန်ရတော့မှာလား။ ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကတော့ တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာမို့ စောင့်ကြည့်ရဦးမှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
celebrity news, Walt Disney
Previous Post: ချာလီရဲ့ နတ်မိမယ်လေး တစ်ယောက်အဖြစ် ပါ၀င်လာတော့မယ့် Kristen Stewart
Next Post: အချစ်မှာ အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက် မရှိဘူးလို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ Heidi Klum